Ezochiri anyị eziokwu banyere ọgwụ mgbochi ogwu site na afọ 1975 - Afrikhepri Fondation
Nje na-egbochi ọgwụ
LEnwere ọtụtụ nde ụmụ nwanyị na-a theụ ọgwụ, mgbochi afọ nke hormonal ma ọ bụ a na-agwọ ndị mmadụ. Ma imirikiti ụmụ nwanyị ndị a amaghị etu ọgwụ ndị a si arụ ọrụ yana mmetụta ha nwere ike n'ahụ ha. Ajụjụ ọnụ a na Prọfesọ Henri Joyeux, ngalaba-akwụkwọ nke akwụkwọ "La pill contraceptive" (Éditions Rocher), na Dominique Vialard.
A na-ebipụta ọtụtụ narị nchọpụta na mmetụta ọjọọ nke pill na nkwarụ ọgwụ. Agba 3e na 4th bụ nanị ihe mbụ nke ihe nwere ike ịbụ nnukwu mmeri ọgwụ nke narị afọ nke iri abụọ na otu. Dị ka ihe atụ, ànyị maara na hormonụ ndị na-emepụta ihe bụ ịrịa ara ara ọhụụ nke na-akpata ọrịa cancer?
Na 1975, enwere ọrịa 7 000 nke ọrịa cancer ọ bụla kwa afọ na France. Na 2013, e nwere 60 000, na nwanyi tọrọ na tọrọ n'ihi na nke Erere ... ọrịa cancer, ọrịa strok, thromboembolism, ịda mbà n'obi, ọnwụ nke libido, autism na ụmụ ... ọtụtụ oké njọ mmetụta na ọtụtụ ọrịa na-emetụta.
na Nje na-egbochi ọgwụ (Éditions Rocher) Pr Henri Joyeux na Dominique Vialard, anyị na-achọpụta ihe mere ndị ọrụ ahụ ike na ọtụtụ ndị dọkịta ji agba nkịtị ma nọgide na-ede ọgwụ ọjọọ. Nzukọ na otu n'ime ndị edemede abụọ, Prof. Henri Joyeux. Mmezi.
Ntak emi afo ekemekde ndiwet n̄wed emi?
Pr Henri Joyeux : Ihe ọjọọ nke mkpụrụ ndụ 3 na 4th na-ada ụda tocsin. Ndị inyom na-azụ ahịa egosipụtawo ize ndụ nke ọgwụ ndị a. Ozi a, nke mgbasa ozi na-akọ n'ọtụtụ ebe, kpochapụrụ ma chịkwaa ọtụtụ ụmụ agbọghọ. Ha bụ n'ezie ọtụtụ ndị ọzọ iji rie mkpụrụ ọgwụ ndị a.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, nwanyị dị afọ 35 na-enweghị obere obi ma ọ bụ ọbara adịghị ọcha na onye na-anaghị ese anwụrụ anwụ n'ihi nkụchi obi. Ọ na-eri ụdị ọgwụ a… M ga-eche n'echiche ezinụlọ nwere obere ụmụaka!
Na mberede, ire ọgwụ ndị a dara, n'ihi ọtụtụ ụjọ na mkpebi gọọmentị ịghara ịkwụghachi ha ọzọ ka ọ ghara iburu nsogbu ndị ahụ na ịghara ịbịa n'ụlọ ikpe, dị ka Maazị Servier na Pick.
Kedu ihe ndị na-esi na ọgwụ mgbochi hormonal pụta na ụmụ nwanyị?
Pr Henri Joyeux : Ọkara nke akwụkwọ anyị depụtara ha zuru ezu ma kọwaa ha n'ụzọ sayensị nke ọha na eze ga-aghọta. Nribiga nke oke hormonal nke homonụ nwanyi abuo (estrogen na progesterone) arụpụtara na arụ ọrụ ma ọ bụ nke enwetara na mamịrị mamịrị bụ ihe dị ize ndụ maka akụkụ ahụ dị nro dị ka ara, akpanwa na ovaries. Ọtụtụ ọrịa na-adịghị mma na ajọ ọrịa n'ihi ọgwụ ahụ, nke ụmụ nwanyị tụlere dị ukwuu nke swiiti, jupụta ụlọ ọgwụ, nwere ọrịa obi, ọrịa ụbụrụ na nke anụ ahụ na-eto eto, kamakwa ọgụ kansa nke ara, olu olu. akpanwa, ovaries. N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ọrịa autoimmune, dị ka thyroiditis, lupus erythematosus, wdg, nwere njikọ chiri anya na ị ofụ ọgwụ ahụ.
Ị na-ekwu na anyị na-ezobe eziokwu ahụ n'aka ndị ọrịa. Ònye ga-eche zoo eziokwu a?
Pr Henri Joyeux : Manufacturinglọ ọrụ mmepụta ihe na-enweta ọtụtụ ijeri na ụdị ọgwụ dị iche iche. Ha na-asọ mpi maka ahịa na mgbasa ozi ahọpụtara nke ọma, nwalere, nyochaa n'okwu ahịa, ọbụlagodi na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na kọleji, ya bụ ịsị ngosi, arụmụka, mkpochapu (n'ikpeazụ) nke mmetụta ndị a hụrụ na mkpụrụ ọgwụ nke ọgbọ ndị gara aga.
Akụkụ na-adịghị mma nke akụkọ a bụ na gọọmentị na-amanye izipu ndị ọrụ ka ha họrọ mkpụrụ ọgwụ 1 na nke 2, ọkachasị ndị dị ize ndụ, na-akpata ọdịda libido, ihe ịrịba ama nke ịmalite ịmụ nwa (ihe otutu, ala na agba ..), oke ibu na oke ibu ma ọ bụ ọrịa mammary, ụmụ ahụhụ ma ọ bụ nke na-adịghị mma.
Laboratories na-ajụzi ajụjụ ziri ezi. Ha ga-echepụta ma kwalite mkpụrụ ọgwụ 5th na 6th, n'ikpeazụ na-adịghị njọ, o yighị, n'ihi na ụmụ nwanyị enwekwaghị ntụkwasị obi ma na-echezi ugbu a.
Olee ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka anyị nwee ike inye ndị inyom?
Pr Henri Joyeux : Nke a bụ akụkụ nke abụọ nke akwụkwọ anyị. O doro anya na ndị a bụ ụzọ dị iche iche nke oge a, ndị na-eji teknụzụ ọhụrụ eme ihe. Ha gụnyere inyere nwanyị aka ịghọta onwe ya nke ọma na mmekọrịta chiri anya ya, iji mata nke ọma ụbọchị ọmụmụ ya ka e wee jikwaa ọmụmụ ọmụmụ di na nwunye ka ha si chọọ, ya mere ka ha nwee ma ọ bụ enweghị nwa ahụ, na-enweghị ị chemicalụ ọgwụ ọgwụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-akpaghasị agụụ mmekọahụ mana ọ bụ maka nsogbu ndị ụmụ nwanyị kwụrụ ụgwọ dị ukwuu.
E nweelarịrị kọmputa ndị dị n'ahịa na-arụ ọrụ na elekere elekere na temometa, dị mfe iji. Naanị iwepụta ụtụtụ ya kwa ụtụtụ n'okpuru ire maka sekọnd ole na ole na nyocha ahụ na-eme ka mmalite nke usoro ọmụmụ gị gbanwee ma gosipụta gị ìhè nke ụbọchị ọmụmụ gị na ohere ọmụmụ. Ọ nwere ike ịdabere na ya, ọ bụghị ihe dị njọ karịa iche echiche banyere ịṅụ ọgwụ gị, nke ọma na nkwanye ùgwù maka ụmụ nwanyị. Ngwa ndị a na-eji kọmputa na-arụ ọrụ zuru ezu, ha ga-ejikwa nkà mgbanwe nkà na ụzụ na nghọta ọhụụ kọwaa.
Interview nke mmiri Tertrais maka JOL Press
Le Pr Henri Joyeux, bụ dọkịta dọkịta na-awa ahụ maka ahụike, Professor of Oncology and Digestive Surgery na Ngalaba Nkà Mmụta Ọgwụ nke Montpellier, dọkịta dọkịta nke Ụlọ Ọgwụ na Cancer Institute nke Montpellier. Akara Cancer Research Cancer International Antoine Lacassagne maka ọrụ ya na Nutrition, ọ bụkwa onyeisi nke ezinụlọ nke France. Onye a ma ama bụ ọkà mmụta sayensị bụ onye mbụ na France iji mee ka ụmụ nwanyị mata ihe ize ndụ ndị dị na pill Ụmụ nwanyị ma ọ bụrụ na ị maara ... bipụtara na 2001.
Dominique Vialard, bụ Sciences Ma na-agụsị akwụkwọ, abụwo odeakụkọ maka ihe karịrị afọ 25. O meela ọtụtụ akwụkwọ, gụnyere akwụkwọ ikpeazụ nke Nobel Prize for Medicine Luc Montagnier, Agha nke Ndụ - Karịa ọgwụgwọ, gbochie, edemede banyere ọgwụ nke ọdịnihu nke a sụgharịrị n'ọtụtụ mba. Onye nta akụkọ na-ahụ maka nlekọta ahụike na ahụike, ya na akwụkwọ akụkọ na-emekọ ihe Ahụike ọzọ.
6 ọhụrụ site na .20,00 XNUMX
7 ejiri site na € 15,31
Zụta € 20,00
Emelitere ikpeazụ na June 12, 2021 9:31 PM
Lelee ohu dị afọ iri na abụọ (12)
Ihe omuma nke Afrika bu ihe omuma
Ikike ima - Don Miguel Ruiz (Audio)
Ibi ndu nke Afrika na ndu ndu kwa ubochi
A na-enye mmanụ aṅụ na eze jelii iji mee ka ahụike gị dịkwuo mma